INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO | pamperedpeopleny.com - Okunye
IHundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, izinkampani eziphethwe kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo (i 'IHundeshagen' , 'thina' noma 'thina' ) uyabazisa ubumfihlo babasebenzisi bethu nababhalisile. Silwela ukungafihli lutho mayelana nokuthi siluqoqa futhi silusebenzise kanjani ulwazi lwakho, ukugcina imininingwane yakho iphephile futhi sikunikeze nezinqumo ezizwakalayo. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ( 'Inqubomgomo' ) ichaza izindlela zobumfihlo ze- www.pamperedpeopleny.com iwebhusayithi ( 'Indawo' ), ephethwe futhi iqhutshwa yiHundeshagen. Le Nqubomgomo yenzelwe ukukusiza uqonde ukuthi yiluphi ulwazi oluqoqwa yiHundeshagen, kungani siluqoqa nokuthi senzani ngalo.
Isiza asihloselwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-13 ubudala, futhi asiqoqi ngokwazi imininingwane yomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma sithola ukuthi siqoqe noma sathola imininingwane yomuntu siqu enganeni engaphansi kweminyaka engu-13 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sizosula lolo lwazi. Uma ukholwa ukuthi singaba neminye imininingwane kusuka noma enganeni engaphansi kweminyaka engu-13, sicela uxhumane nathi ku privacy@pamperedpeopleny.com .
ukususwa kwezinwele zobuso ekhaya
Ukuxhumana Kwezokumaketha nokwabelana namaqembu wesithathu. Ungabuyekeza okuncamelayo maqondana nokuthola ukuxhumana okuthile kokukhangisa okuvela kithi, nokwabelana kwethu ngolwazi lomuntu siqu nabantu besithathu. Ungakwenza lokho ngokuxhumana nathi ku- privacy@pamperedpeopleny.com . Ungase futhi uphume ekutholeni ukuxhumana kwezokumaketha nge-imeyili, ngokulandela imiyalo 'yokuzikhipha ohlwini' enikezwe kuwo wonke ama-imeyili owathola kithi. Ungase futhi ulungise izaziso zakho zohlelo lokusebenza kudivayisi yakho yeselula ngokusebenzisa izilungiselelo zakho zedivayisi noma zohlelo lokusebenza.
Amalungelo wobumfihlo eCalifornia. ICalifornia Civil Code Isigaba 1798.83 sivumela abasebenzisi beSayithi lethu abangabahlali baseCalifornia ukuthi bacele imininingwane ethile maqondana nokudalulwa kwethu kwemininingwane yomuntu siqu kubantu besithathu ngezinjongo zabo zokuthengisa ngqo. Ukuze wenze isicelo esinjalo, sicela uxhumane nathi ku- privacy@pamperedpeopleny.com .
Umthombo wamakhukhi: pamperedpeopleny.com
Ukubuza imininingwane yomuntu esiyiqoqe mayelana nawe ku-inthanethi kusuka eSizeni lapho le Nqubomgomo Yobumfihlo ithunyelwe khona noma ukulungisa leyo mininingwane yomuntu, ungasithumela i-imeyili ku privacy@pamperedpeopleny.com . Ungacela futhi uthole ukususwa Kweminikelo Yakho Yomsebenzisi ngokuthumela i-imeyili privacy@pamperedpeopleny.com ngesicelo sakho futhi ucacisa umnikelo othile womsebenzisi ofuna ukuwususa. Angeke samukele isicelo sokushintsha noma sokususa noma yiluphi ulwazi uma sikholwa ukuthi isenzo esinjalo sizokwephula noma imuphi umthetho noma imfuneko yezomthetho noma sidale ukuthi ulwazi lungalungile. Ukususwa Kweminikelo Yakho Yomsebenzisi eSizeni akuqinisekisi ukususwa okuphelele noma okuphelele kwaleyo Minikelo Yomsebenzisi eSizeni njengoba amakhophi angahlala ebukeka emakhasini afakwe kunqolobane noma afakwe kungobo yomlando noma kungenzeka ukuthi akopishwa noma agcinwa abanye abasebenzisi beSayithi. Ungazikhipha ohlwini kunoma iziphi izincwadi zezindaba noma ama-imeyili ahlukahlukene wokuphromotha nganoma yisiphi isikhathi ngokuchofoza izixhumanisi 'zokuzikhipha ohlwini' ezinikezwe kulokho kuxhumana. Ngeke ukwazi ukuphuma ekuxhumaneni okuhlobene neSayithi, njengokuqinisekiswa kwe-akhawunti, iziqinisekiso zokuthenga nemiyalezo yokuphatha, inqobo nje uma ubhaliswe neSayithi.
Ukukhathazeka Kobumfihlo. Uma unanoma ikuphi ukukhathazeka noma isikhalazo mayelana nobumfihlo eSizeni, sicela uxhumane nathi eHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA noma usithumele i-imeyili ku privacy@pamperedpeopleny.com . Sizokwenza konke okusemandleni ukuphendula kuwe ngesikhathi esifanele nangendlela efanelekile ukuze siphendule imibuzo yakho futhi sixazulule izinto ezikukhathazayo. © Hundeshagen Digital Media, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe. IPurpleclover ne-Purpleclover.com yizimpawu zokuhweba zeHundeshagen Digital Media, LLC
indlela yokunciphisa impandla ngokwemvelo
Kuthumela i-imeyili ku-: privacy@pamperedpeopleny.com
kanjani ukwandisa izinwele ukukhula
Uma unanoma yikuphi ukukhathazeka noma isikhalazo mayelana nobumfihlo eSizeni, izindlela esiqoqa futhi sisebenzise imininingwane yakho yomuntu siqu, izinketho zakho namalungelo akho mayelana nokusetshenziswa okunjalo, noma ufisa ukusebenzisa amalungelo akho ngaphansi komthetho waseCalifornia, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi kwaHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Centre, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, sithumele i-imeyili ku privacy@pamperedpeopleny.com noma ushayele ku-1-866-522-5025.
IHundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, izinhlangano zayo eziphethwe kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo ('Hundeshagen', 'we', 'us', noma 'yethu') iyabazisa ubumfihlo babasebenzisi bethu nababhalisile. Silwela ukungafihli lutho mayelana nokuthi siluqoqa futhi silusebenzise kanjani uLwazi lwakho (njengoba luchazwe ngezansi), ukugcina imininingwane yakho iphephile futhi sikunikeze nezinqumo ezizwakalayo. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ('Inqubomgomo') ichaza izinqubo zobumfihlo ze www.pamperedpeopleny.com iwebhusayithi ('iSayithi'), ephethwe, futhi esebenza, iphelele noma ingxenye yayo, yiHundeshagen. Le Nqubomgomo ichaza ukuthi imininingwane yakho iqoqwa, isetshenziswe kanjani, futhi idalulwe kanjani yiHundeshagen njengesilawuli sedatha.
Indawo yethu isingathwa e-United States. Lokhu kusho ukuthi Ulwazi esiluqoqayo luzocutshungulwa yithi e-United States, izwe elinezinga eliphansi lokuvikelwa kwemininingwane yomuntu kune-European Union. Kodwa-ke, njengoba sinikela ngeSayithi lethu kanye nezinsizakalo kubahlali base-European Union, iHundeshagen ngakho-ke futhi ingaphansi kwemithetho yaseYurophu yokuvikela imininingwane, ikakhulukazi i-EU General Data Protection Regulation (i-GDPR).
IHundeshagen isezinhlelweni zokuqoka ozomela i-EU futhi uzokwazisa ngohlobo olusha olusha lwale Nqubomgomo uma sekuqokwe omele i-EU.
Isiza asihloselwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-16 ubudala, futhi asiqoqi ulwazi lomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-16. Uma sithola ukuthi siqoqe noma sathola imininingwane yomuntu siqu enganeni engaphansi kweminyaka engu-16 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sizosula lolo lwazi. Uma ukholwa ukuthi singaba neminye imininingwane kusuka noma enganeni engaphansi kweminyaka eyi-16, sicela uxhumane nathi ku privacy@pamperedpeopleny.com
Ithebula elingezansi liqukethe incazelo yobubanzi bezizathu ezahlukahlukene zokucubungula zomthetho ezitholakala ngaphansi kwe-GDPR iHundeshagen ethembele kuyo lapho iqoqa imininingwane:
ukuvivinya isilevu kabili ngaphambi nangemva
Imvume: lapho uvumile ukusebenzisa kwethu imininingwane yakho (lapho uzobe unikezwe ifomu lokuvuma maqondana nanoma yikuphi ukusetshenziswa okunjalo futhi ungahoxisa imvume yakho noma kunini ngokunikeza isaziso privacy@pamperedpeopleny.com
Sisebenzisa Ulwazi esiluqoqayo ukuthola, ukuphenya, nokuvimbela imisebenzi ephula imigomo yethu yokusebenzisa, engaba yinkohliso, yephule ilungelo lobunikazi, noma eminye imithetho, ukuthobela izidingo zomthetho, nokuvikela amalungelo ethu namalungelo nokuphepha kwabasebenzisi bethu. nabanye. Singaphinde sinikeze ngemininingwane yakho yangasese kunoma ngubani ongaba isitholi noma umtshali zimali kunoma iyiphi ingxenye yebhizinisi likaHundeshagen ngenhloso yalokho kutholwa noma ukutshalwa kwezimali.
IHundeshagen ilawula imininingwane yakho futhi ithathwa njengesilawuli sedatha njengoba kuchaziwe ku-GDPR. Singabelana futhi sidalule Ulwazi oluhlanganisiwe nolukhonjwe ngabasebenzisi bethu ngaphandle komkhawulo.
Amazwe athile angaphandle kwe-EEA avunyelwe yi-European Commission njengokunikela ngokuvikelwa okulingana nemithetho ye-EEA yokuvikela imininingwane. Imithetho yokuvikela idatha ye-EU ivumela iHundeshagen ukuthi idlulisele ngokukhululekile imininingwane yomuntu emazweni anjalo. Sicela uxhumane nathi ku- privacy@pamperedpeopleny.com uma ungathanda ukubona ikhophi lezivikelo esizisebenzisayo maqondana nokuthunyelwa kwedatha yakho yomuntu siqu.
Ungabuyekeza okuncamelayo maqondana nokuthola ukuxhumana okuthile kokukhangisa okuvela kithi, nokwabelana kwethu ngolwazi lomuntu siqu nabantu besithathu. Ungakwenza lokho ngokuxhumana nathi ku- privacy@pamperedpeopleny.com . Ungase futhi uphume ekutholeni ukuxhumana kwezokumaketha nge-imeyili, ngokulandela imiyalo 'yokuzikhipha ohlwini' enikezwe kuwo wonke ama-imeyili owathola kithi. Ungase futhi ulungise izaziso zakho zohlelo lokusebenza kudivayisi yakho yeselula ngokusebenzisa izilungiselelo zakho zedivayisi noma zohlelo lokusebenza.
amakhambi asekhaya okukhulisa izinwele ngokushesha
Ukukhathazeka Kobumfihlo . Uma unokukhathazeka noma isikhalazo mayelana nobumfihlo kumaSayithi, sicela uxhumane nathi eHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thFloor, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. noma usithumele i-imeyili ku-privacy@pamperedpeopleny.com. Sizokwenza konke okusemandleni ukuphendula kuwe ngesikhathi esifanele nangendlela efanelekile ukuze siphendule imibuzo yakho futhi sixazulule izinto ezikukhathazayo.
© Hundeshagen Digital Media, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe. IHundeshagen nepamperedpeopleny.com yizimpawu zokuhweba ezibhalisiwe zeHundeshagen Digital Media, LLC
ukuvimbela kanjani ukuwa kwezinwele kwabesifazane
ungakulawula kanjani ukukhula kwezinwele ebusweni
izinhlobo ze-asanas ku-yoga
izimonyo ezilula zezivakashi zomshado
ukuthi ungamisa kanjani izinwele uwe futhi ukhule izinwele ezintsha
izivivinyo ezinhle kakhulu zokunciphisa amafutha esiswini ngokushesha